အွန်လိုင်းမှ ရွှေနဖူးစာ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
⚠️⚠️⚠️ မှတ်ချက် – အင်းစက်စာပေ ဖြစ်ပါသည်။ အင်းစက်စာပေဆိုသည်မှာ မိသားစု မောင်နှမ သွေးသားရင်း အချင်းချင်း လိင်းဆက်ဆံသော အကြောင်းအရာကို စိတ်ကူးပုံဖော် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မကြိုက် မနှစ်သက်ပါက မဖတ်ရှုပဲ ကျော်သွားပေးပါ။ ယခုဝတ္ထုမှာ စာပေသဘော ရေးသားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် လိုက်လံအတုယူ ပြုလုပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ⚠️⚠️⚠️
ထက်မြက် တစ်ယောက် ၁၀ တန်း ဖြေပြီးထား၍ ကျောင်းပိတ်ထားသောကြောင့် အိမ်မှာပဲ အိပ်လိုက်စားလိုက် အခန်းအောင်းကာ ဖုန်းထဲမှ အောကားများကြည့်လိုက်၊ တိတ်တခိုးဆိုဒ်မှ အင်းစက်စာများဖတ်လိုက်၊ လီးတောင်ရင် ဂွင်းထုလိုက်ဖြင့် ရှိနေလေသည်။ သူသည် သူငယ်ချင်းများ အပေါင်းအသင်းများလည်း မထားပါ။ အခြားလူငယ်များလို ဆော်ထားတာလည်း မရှိပဲ သူဘာသာအေးဆေးပင် နေတတ်လေသည်။
ဒါပေမယ့် သူသည် သူ့အမေ ဒေါ်ဇာခြည်ထက်အား သူ ၉ တန်းနှစ်လောက်မှစကာ လိုးချင်မိလေသည်။ သို့ပေမယ့် သားအမိဖြစ်နေ၍ သူ့စိတ်ဆန္ဒများအား ချွန်းအုပ်ကာ ထားမိလေသည်။ သူ အင်းစက်ဇာတ်လမ်းဖတ်ကာ ဇာတ်ကောင် အမေနေရာမှာ သူ့အမေ ဒေါ်ဇာခြည်ထက်အား စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ဇာတ်ကောင် သားလုပ်သည့်နေရာမှာ သူက ဝင်ရောက်ကာ သူ့အမေကို လိုးသည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် ပုံဖော်၍ ပုဆိုးကိုလှန် သူ့လီးအား လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းထုလိုက်ရာ အတန်ကြာတော့ အရည်များ အိပ်ယာပေါ် ပန်းထုတ်ကာ ပြီးသွားလေသည်။ ထို့နောက် ပုဆိုး အဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သုတ်ကာ ကုတင်ခြေရင်းမှာ ထားလိုက်လေသည်။
ထက်မြက်မှာ ၈ တန်းနှစ်မှစကာ ဂွင်းထုတတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သူ ဗိုက်ဆာ၍ ထမင်းစားရန် အခန်းထဲမှ ထွက်လာရာ သူ့အမေနှင့် အခန်းဝမှာ ဆုံမိတော့ သူ့အမေက
“သား မင်းအခန်းထဲမှာလည်း ရှုပ်ပွဲနေတာပဲ၊ ကြွက်သိုက်အတိုင်းပဲ၊ ဒီကလေး အတော်ညစ်ပတ်တယ်”
ဟုပြောကာ သူ့အခန်းထဲ ဝင်သွားလေသည်။ သူလည်း ထမင်းစားခန်းသို့သွားကာ ထမင်းစားနေလေသည်။
ဇာခြည်ထက်သည် သား ကုတင်ဘေး၌ ချွတ်ပုံထားသော အဝတ်များအား ခြင်းထဲထည့်နေစဉ် အိပ်ယာခင်းထံမှ စိမ်းရွှေရွှေ အနံ့ရမိသောအခါ ဒါ သုတ်ရည်အနံ့ ဖြစ်မှန်း သိလိုက်လေသည်။ ဇာခြည်ထက်သည် လိုးကိစ္စနှင့် ကင်းကွာနေသည်မှာ လေးနှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် မိမိသားပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ပုရိသ ဆန့်ကျင်ဘက် အရည်အနံ့ကိုရတော့ သူမ၏ အဖုတ်တွင်းမှ ယားယံလာသလိုခံစားရကာ
“အော်… သားတောင် လူပျိုးစိတ် ပေါက်နေပြီပဲ”
ဟု စိတ်ထဲကပြောလျက် ရေချိုးခန်းသို့လာကာ သား အဝတ်များကို လျှော်ဖွတ်၍ လှမ်းလိုက်လေသည်။
ဇာခြည်ထက်မှာ အသက် ၃၆ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ သူမ ခင်ပွန်းမှာ သားအသက် ၁၂ နှစ်လောက်တွင် ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး အခုဆို ခင်ပွန်းဆုံးတာ ၄ နှစ်ခန့် ရှိပေပြီ။ ခင်ပွန်း ဆုံးပါးစဉ်က သူမဟာ အရွယ်ကောင်းပဲရှိသေးကာ တခါတရံ လိုးချင် စိတ်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း သူမလက်ဖြင့်သာ အာသာဖြေခဲ့ရသည်။ သားကိုလည်း ပထွေးနှင့် မနေစေလို၍ နောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုရန် ဆုံးဖြတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သူမခင်ပွန်း မဆုံးပါးခင်က ရှာဖွေထားသော ငွေကြေးများကို သူမက စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထား၍ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ပွဲစား ခြံပွဲစား လုပ်သောကြောင့် သူမတို့ သားအမိမှာ အများနည်းတူ နေနိုင် စားနိုင်လေသည်။
သူမ အရပ်မှာ ၅ ပေ ၅ ရှိကာ အရပ်အမောင်းနှင့်အညီ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ပြေပျစ်ပြီး ရင်ကြီး၊ ခါးသေး၊ တင်ကြီးသော လုံးကြီးပေါက်လှလေး ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ဂုတ်ဝဲ ဆံပင်လေးများအား ဖြန့်ချထားတတ်သောကြောင့် ဆယ်ကျော်သက် အပျိုဖြန်းမလေးအလား မှတ်မှားရပေသည်။
တနေ့ နေ့လည်ဘက် ဇာခြည်ထက်သည် ဧည့်ခန်းဆက်တီခုံ၌ ထိုင်ကာ ဖုန်းပွတ်နေတုန်း ထက်မြက်သည် သူ့အမေ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်အား မသိမသာ ခိုးကြည့်လိုက်ပြီး မှတ်ထားကာ သူ့အမေ အကောင့်ကို fri အပ်လိုက်လေသည်။
သူ့အမေအကောင့် နာမည်က နတ်သမီးလေး ဖြစ်ပြီး သူ့အကောင့် နာမည်က ချစ်နတ်ဆိုးလေးဖြစ်သည်။ ခဏကြာတော့ သူ့အမေသည် သူ့အကောင့်အား လက်ခံလိုက်သောကြောင့် သူကစပြီး
“တို့ကို နတ်သမီးလေးလို့ပဲ မှတ်ထားပါ၊ ယူ့နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ”
သူ့အမေက ဖုန်းထဲမှ အခြားဘဲတစ်ဗွေက သူမအား လာကြူတယ်ထင်ပြီး ဖီးတက်၍ မေးလိုက်ရာ
“တို့နာမည် နတ်ဆိုးလေးလို့ပဲ မှတ်ထားပါ”
“ဒါဆို… မင်းက… တို့သားအရွယ်လောက်ပဲ ရှိတာပေါ့… တို့က… ၃၆ နှစ်”
ဟု သူမက ပြောပြီး
“ဘိုင့် ညမှ ဆုံမယ်နော်”
ဖုန်းထဲမှာ သူ့အမေ့ကိုကြူပြီး အခြေနေကောင်းရင် သူမအား လိုးရမည်ဟု တေးထားလိုက်လေသည်။
ဇာခြည်ထက်မှာ အသက် ၃၆ ပင်ရှိသေး၍ သွေးသားဆူဖြိုးကာ လိုးချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်သဖြင့် အပြင်၌လည်း ဇယားမရှုပ်ချင်သောကြောင့် ဖုန်းထဲမှာပဲ သားအရွယ် ကောင်လေးများနှင့် ကြူတတ်ကာ တခါတရံ လိုးချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာရင် ထိုကောင်လေးများနှင့် sex အကြောင်းပြောကာ ဗီဒီယိုကောခေါ်၍ သူမမျက်နှာကိုမပါစေပဲ သူမအဖုတ်အားပြပြီး တဖက်မှလည်း သူမအား လီးကိုဆုပ်ကိုင်၍ ဂွင်းထုပြလျှင် သူမကလည်း အဖုတ်အားလက်ဖြင့်နှိုက်၍ အာသာဖြေကာ သူမ၏ လိုးချင်စိတ်များအား အခန်းတွင်းမှာ ဖြေရှင်းတတ်လေသည်။
ညရောက်တော့ ထက်မြက် နှင့် သူ့အမေတို့ အွန်လိုင်းမှာ စကားပြောဖြစ်ကြပြီး ထက်မြက်က တဖြေးဖြေး သူမအား sex အကြောင်းများကို ဦးတည်၍ ပြောရာ သူမကလည်း ပြန်လည်ပြောသောကြောင့် နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက် ညီနေကြလေသည်။
နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ ထက်မြက်က သူမအား sex ချက်ရအောင်ဟု စာရိုက်ကာ ဗီဒီယိုကော ခေါ်လိုက်ပြီး သူ့လီးအား ပုဆိုးလှန်၍ ဂွင်းထုပြလိုက်သည်။ သူမကလည်း သူမအဖုတ်အား ပြန်၍ပြသောကြောင့် အမေ့အဖုတ်အား အခုမှ မြင်ဖူး၍ ထုလိုက်တာ ဘာမှမကြာလိုက် အရည်တွေ ပန်းထွက်ကာ ပြီးသွားပြီး သူမကလည်း သူမအဖုတ်အား လက်ဖြင့် အသွင်းအထုတ် အမြန်လုပ်ကာ ပြီးသွားလေသည်။
“မမ အဖုတ်ကို ကျွန်တော် လိုးချင်လိုက်တာ”
ဟု စာဖြင့်ရိုက်ပြီး ပြောလိုက်ရာ
“လိုးချင်လိုးလေ မင်းက မမနေတဲ့ နေရာကို သိလို့လား”
ဟု သူ့အားမေးပြီး “ဘိုင့်” ဟုဆိုကာ သူမလိုင်းပေါ်မှ ဆင်းသွားလေသည်။
ထက်မြက်သည် အတန်ကြာတော့ သူ့အမေ အခန်းကို သွားကြည့်ရာ တံခါးလေးမှာ မပိတ်ထားပဲ ဟစိလေးဖြစ်နေသဖြင့် တံခါးကြားမှ အခန်းတွင်းသို့ ကြည့်လိုက်ကာ မီးလုံးအောက်ဝယ် ကုတင်ထက် အိပ်ယာပေါ်၌ အောက်ပိုင်းတွင် ထမီမရှိပဲ ပေါင်နှစ်ဖက်အား ဖြဲထားပြီး လက်ညှိုး၊ လက်မ နှစ်ချောင်းပူးဖြင့် အဖုတ်ထဲထည့်၍ “ဟင်း… ဟင်း” ဟု တီးတိုးလေး ရေရွတ်လျက် အသွင်းအထုတ်ကို အမြန်လုပ်ပြီး အာသာဖြေနေသော သူ့အမေကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ထို့နောက် သူလည်း အခန်းသို့ ပြန်လာပြီး နောက်နေ့ သူ့အမေအားလိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။
ဟု အစချီပြီး သူမအား ဘယ်လိုလိုးချင်ကြောင်း ပြောရာ၊ သူမကလည်း ဘယ်လို အလိုးခံချင်ကြောင်း ပြောလာသဖြင့် သူမကို သူအခု လာလိုးလျင် ခံမည်လားဟု မေးလိုက်လေသည်။
“မမ အိမ်ကို သိရင် လာခဲ့လေ”
“အခု လာခဲ့မယ် မမ”
ဟု ပြောပြီး သူ့အမေ အခန်းရှေ့သို့ သွားလိုက်လေသည်။
အခန်းရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ ထက်မြက်က
ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် သူမ အံ့ဩသွားလေသည်။ ခုနက နတ်ဆိုးလေးဆိုသော ကောင်လေးကလည်း “အခုလာခဲ့မယ် မမ” ဟု ပြောထားသောကြောင့် သူမစိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားလျက်
ဟု အတန်ကြာမှ သူမပြောလိုက်ရာ ထက်မြက်က သူ့အမေ အိပ်နေသည့် နဘေးမှာ ဝင်လှဲလိုက်လေသည်။
“မမ ကျွန်တော် ရောက်ပြီ”
“ဘယ်မှာ ရောက်တာလဲ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပဲနဲ့”
“တကယ်ရောက်နေတာ မမရဲ့၊ မမဘေးမှာ ရောက်နေတဲ့ သူက နတ်ဆိုးလေးခေါ် အမေ့သား ထက်မြက်ပါ၊ အမေ့ကို လိုးချင်တယ် အမေရယ်၊ မမရယ်”
ဟု စာရိုက်ပြောလိုက်ပြီး လိုင်းအောက်ကာ ဖုန်းပိတ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ သူ့အမေ ပါးလေးအား နမ်းလိုက်ပြီး
“ချစ်နတ်ဆိုးလေး အကောင့်နဲ့ အမေ့ကို sex ချက်နေတာ သားပါ၊ အမေ့ကို သားချစ်တယ်”
“မဖြစ်နိုင်ဘူး သား၊ မင်း အခုချက်ချင်း အမေ့အခန်းထဲက ထွက်သွား”
“အမေ့ အမှားတွေပါ သားရယ် ဟင့်..ဟင့်…”
“အမေ မမှားပါဘူး… သားက… အရင်ကတည်းက အမေ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတာပါ၊ ပြီးတော့… အမေ့ကို သားလိုးချင်တယ်၊ သားကတော့ မှားလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ အမေ… အမေ့ကိုပဲ ချစ်တယ်၊ အမေ့ကိုပဲ လိုချင်တယ်”
ဟု ဇွတ်ပြောကာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးအား ပက်လက်ဆွဲလှန်လိုက်ပြီး နှုစ်ခမ်းလေး နှစ်လွှာအား ဖိစုပ်၍ အတန်ကြာ နမ်းလိုက်လေသည်။
သူ့အမေကလည်း သူ့အား ပြန်လည်ကာ နမ်းစုပ်ပြီး သူ့ပုဆိုးအား ချွတ်ချကာ သူမရဲ့ တီရှပ်လေးအား ခါးမှနေ၍ အထက်သို့ လှန်တင်ကာ ချွတ်လိုက်လေသည်။
“သားရယ် အမေတို့ မှားကုန်ကြတော့မယ်ကွာ”
“အမေရယ် ခုနကတောင် သားတို့ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်းပြီးပြီ၊ မှားလည်း မထူးဘူး၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမလိုးတာ သဘာဝတရားတွေပါ”
ဟု လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး အမေထက် သားတစ်လကြီးကာ ပြောလိုက်တော့ သူမက
“သား သဘောပဲကွာ၊ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စကို ပတ်ဝန်းကျင်တော့ မသိစေနဲ့၊ သိသွားရင် အမေတို့ လူကြားထဲ မျက်နှာမပြရဲအောင် ဖြစ်သွားမယ်”
“စိတ်ချပါ အမေ သားတို့ကိစ္စကို မသိစေရပါဘူး၊ အိမ်ထဲမှာပဲ သားတို့က ချစ်ကြမှာကို၊ မစိုးရိမ်ပါနဲ့”
သူမက ဘရာနီညိုရောင်လေးအား လက်နောက်ပြန် ကျောအောက်သို့လျှိုပြီး ဂျိပ်ဖြုတ်၍ ချွတ်လိုက်ရာ ဖွေးကနဲပေါ်လာသော သူငယ်စဉ်က စို့ခဲ့ရသော အမေ့နို့နှစ်လုံးအား တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ထို့နောက် အမေ့နို့တစ်လုံးအား ပါးစပ်ဖြင့်ငုံ့ကာ စို့နေပြီး ကျန်နို့တစ်လုံးအား လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးအား ပွတ်ပေးလိုက်တော့
ဟုပြောကာ သူ့ခေါင်းအား သူမလက်ဖြင့် ပွတ်သပ်၍
ဟု သူမက ပြောလိုက်ရာ နောက်တစ်လုံးအား သူအတန်ကြာအောင် ပြောင်းစို့ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက် သူ့အမေ၏ ဝမ်းဗိုက်သားချပ်ချပ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးအား လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်၍ သူမ၏ ထမီအား အထက်ဆင်စမှ ချွတ်ချလိုက်ပြီး ဘွားကနဲပေါ်လာသော အမွေးများရိတ်ထား၍ ပြောင်ရှင်းနေသော စောက်ပက် အကွဲကြောင်းကြီးအတိုင်း သူ့လက်ဝါးဖြင့် ပွတ်လိုက်လေသည်။
ဟု ငြီးသံလေးများ ထွက်ပေါ်လာပြီး သူမပေါင်ကြားသို့ မျက်နှာအပ်ကာ စောက်ပက်ကြီးအား လျှာဖြင့် အပေါ်မှအောက်၊ အောက်မှအပေါ် ယက်လိုက်ရာ
“အ… အား…. ဟင်းး… ဟင်း… သားရယ်… အမေ့ဟာထဲကို.. သားဟာနဲ့ ထည့်လိုက်ပါတော့… အား… အမေ မရတော့ဘူး”
“သားလီးကြီးနဲ့… အမေ့ စောက်ပက်ကို လိုးတော့မယ်”
ဟု တမင် သူမ၏ ကမားစိတ်များကြွလာအောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြောလိုက်လေသည်။
“အမေ့စောက်ကို… သားလီးနဲ့ လိုးတော့ကွာ…ဟွန်း.. တခါထဲ မပြောလိုက်ချင်ဘူး”
ဟု သူ့အား မျက်စောင်းလေးထိုးကာ သူမပြောလိုက်တော့…. သူမ၏ ပေါင်ကြား၌ ဒူးထောက်နေရာယူပြီး လက်တစ်ဖက်က သူ့လီးကိုကိုင်ကာ သူမ စောက်ပက်ဝသို့ တေ့ပြီး ခါးကော့၍ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ မလိုးတာကြာပီဖြစ်၍ သားက ဆောင့်လိုးလိုက်သောကြောင့် သူမ နာ၍ အော်လိုက်လေသည်။
“အား.. အမေ့… ကျွတ်စ်ဘွစ်… ဗလစ်… ဖွတ်…ဖတ်… ပလောက်”
ထက်မြက်သည် ဘယ်ကတည်းကများ သူ့အမေ စောက်ပက်အား လိုးချင်နေမှန်းမသိ။ သူ့အမေ စောက်ပက်ထဲ သူ့ဥနှစ်လုံးပါ ကျွံဝင်မတတ် ကုတင်တိုင်များ လှုပ်ခါနေအောင်ကို ကျုံးလိုးနေလေသည်။
“ကောင်းလား… အမေ.. သားလိုးတာ”
ဟု သူမအား မေးလိုက်ရာ
“ကောင်းတယ် သား… အမေ့ကို ဆောင့်လိုးပေး”
ဟု သူမလည်း လီးငတ်နေ၍ သားအားပြောလိုက်လေသည်။
ထက်မြက်က နိုနှစ်လုံးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုးနေပြီး သူမကလည်း အောက်မှ ကော့ပင့်ပေးလျက် သားအမိနှစ်ယောက် အတိုင်အဖောက် ညီနေကြနေသည်။ ထက်မြက်မှာလည်း သူလိုးချင်ခဲ့ရသော အမေ့စောက်ပက်ကြီးကို လိုးနေရ၍ မီးပွင့်ထွက်မတတ် ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ
“အ…အားး… ဟင်းး..ဟင်း.. သား… အမေ… ပြီးခါနီးပြီ
ဟု ပြောကာ မကြာခင် သူမ တွန့်ကနဲဖြစ်လျက် အိပ်ယာခင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တွန့်ကြေနေအောင် ဆုပ်ဆွဲကာ ပြီးသွားလေသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ထက်မြက်လည်း သူ့အား မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော အမေ ဒေါ်ဇာခြည်ထက်၏ စောက်ပက်အတွင်းသို့ အရည်များ ပန်းထွက်ကာ ပြီးသွားလေ သည်။ ထိုညမှစကာ ထက်မြက်နှင့် သူ့အမေတို့ ညစဉ်ညတိုင်း လိုးကြဆော်ကြ ဖြစ်ကြသည်။
ဆယ်တန်း အောင်စာရင်းထွက်တော့ ထက်မြက် အောင်ကာ အမေကို စိတ်မချ၍ ဒေး မတက်ပဲ အဝေးသင်ပဲယူကာ အမေ့ကို လိုးလိုက် စာကျက်လိုက်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် နေလာခဲ့ရာ အချိန်ရာသီ စက်ဝိုင်းကြီးက လည်ပတ်နေပြီး ထက်မြက်တောင် ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရကာ ရုံးတွင် စာရေး ဝင်လုပ်နေပြီး အသက် ၂၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ အမေ ဒေါ်ဇာခြည်ထက်မှာ ၄၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး သူ့အမေကို သူအခုထိ အလိုးမပျက်ခဲ့ပေ။ သူ့အမေသည် အခုဆို အရင်လို ဂုတ်ဝဲဆံပင်လေးဖြင့် မဟုတ်တော့ပဲ ကျောလည်ခန့်ရှိ ဆံပင်အား ရှေ့မှ အုပ်လုံးသိမ်းကာ နောက်တွင်စည်း၍ ချထားပြီး ပါတိတ်ဝမ်းဆက်လေးတွေသာ ပို၍ဝတ်လာသောကြောင့် ကျက်သရေရှိစွာ ချောမောလှပနေ၍ သူ့မျက်လုံးထဲတွင် အမေကလွဲ၍ ကျန်မိန်းမများအား ဖွဲဆန်ကွဲဟုသာ သတ်မှတ်ထားလေသည်။
ထက်မြက် ရုံးဆင်း၍ အိမ်သို့ပြန်လာ‌ခဲ့လေသည်။
“မပင်ပါဘူး…ဟောဒီ…မောင့်မိန်းမ မျက်နှာလေးမြင်ရတာ မောင့်ရင်ထဲ အေးချမ်းသွားတာပဲ”
ဟုပြောပြီး သူ့အမေ၏ ပါးလေးအား နမ်းလိုက်ပြီး
“မောင်တို့ အခန်းထဲ သွားကြရအောင်… မ… ချစ်ချင်နေပြီ”
“ချစ်ချင်နေတာ ဟုတ်လို့လား မောင်ရယ်”
ဟုဆိုကာ.. သူ့ပုဆိုးပေါ်မှ လီးကြီးအား သူမလက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်၍
“ဒီကောင်ကြီး တင်းနေလို့… ထန်နေတာ မဟုတ်လား… လာ… မမ လျှော့ပေးမယ်”
ဟုပြောပြီး အခန်းထဲသို့ ဝင်ခဲ့ကြလေသည်။
သူမ၏ ထမီအား ဗိုက်ပေါ်လှန်တင်ကာ သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်၍ ၅ နှစ်ကျော် လိုးလာခဲ့ရသော သူ့အမေ စောပတ်ကြီးအဝမှာ လက်တစ်ဖက်က လီးကိုကိုင်ပြီး သွင်းလိုက်လေသည်။
အွန်လိုင်းမှစခဲ့သော ရွှေနဖူးစာ သူ့ရဲ့ ဖူးစာဖက် အမေ့ စောက်ပက်ကြီးအား မြိန်ရည်ယှက်ရည် အတန်ကြာ လိုးလိုက်ရာ
“အ… အား… မောင်… မ… ပြီးတော့မယ်… ဆောင့်လိုးပေး”
ထက်မြက် အတန်ကြာ ဆောင့်လိုးပေးပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူရော သူ့အမေပါ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ပြိုင်တူ ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 6,406
ခိုင်ရွှေဝါမြအခက် ကြွေရက်တယ်စော →